नेपाल लायन्स विश्वमै एक नम्बरमा छ- सुष्मा शर्मा – Nepal Japan
नेपाली समय : 10:29:06
जापानी समय : 01:44:06
21 June, 2019 15:18 | अन्तरवार्ता | comments | 94500 Views
विश्वव्यापी सञ्जाल भएको लायन्स क्लब सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय अग्रणी संस्था हो र नेपालमा पनि लायन निकै सक्रिय छ । लायनमा आबद्ध हुनुमा नै गर्व गर्नेहरुको बीचमा लायनको नेतृत्वमा पुग्नु कम महत्वको विषय हैन अझ त्यसमा पनि महिला सो स्थानमा पुग्दा त्यसको गरिमा अझै बढ्छ । लायनको पूर्व डिस्ट्रिक गभर्नर सुष्मा शर्मासंग यिनै विषयमा नेपालजापान डटकमका लागि सूर्य कोइराले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–
० लायन्स क्लवको पहिलो महिला गभर्नर हुनुभयो, के अनुभव भयो त्यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व गर्दा ?
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएको पूर्ण परोपकारी संस्थाको नेपालबाट नेतृत्व लिन पाउँदा यसलाई सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुका गौरबको विषय हो भन्ने ठानेको छु । हाम्रो समाजमा महिलाहरु अलिकति पछाडि नै रहेको बेलामा मैले सानै उमेरमा नेपालको झण्डा बोकेर नेपाल र नेपालीलाई चिनाउँदै संसारको ठूलो सामाजिक संस्थामा रहेर आफूभन्दा पछाडि परेकालाई सेवा, सद्भाव, भाइचारा बाँड्न पाउँदा महिलाले पनि अवसर पाएमा अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका साथ आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरें ।
० त्यसबेला यहाँले लिनुभएका केही परोपकारी निर्णयहरु कस्ता थिए, सुनाउनुहोस् न ?
त्यतिबेला नेपालमा लायनिजम यतिधेरै पैmलिएको थिएन । मात्र दुईवटा डिष्ट्रिक्ट थियो र लायन्समा लिडरसीपमा रहेर गरेका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गरिएका सामाजिक कामहरुको अनुभव छ । जसमध्ये त्यतिबेला संगठन विस्तारका लागि ‘डिष्ट्रिक्ट वाइफरेशन’ एजेन्डालाई इन्टरनेशनलसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको थिएँ । राष्ट्रमा परेको दैविक प्रकोपमा ठूलो सहयोग पुर्याएको थिएँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रुपमा भन्ने हो भने पाकिस्तानमा गएको ठूलो भूकम्पमा नेपालबाट सहयोग पुर्याउने काम लायन्स क्लवका तर्पmबाट मेरै नेतृत्वमा भएको थियो । रक्तदान, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कति योगदान दिइयो लेखाजोखा राखेको छैन मैले ।
माओवादी युद्धको समय भएका कारणले जेसिस, मानवअधिकार संगठन र लायन्सको नेतृत्वमा शान्ति स्थापनार्थ ठूलो पहलकदमी मैले लिएको थिएँ । डिष्ट्रिक्ट र इन्टरनेशनल बीचको आन्तरिक हिसाव कितावको समस्या थियो त्यतिबेला । त्यो नमिलेको हिसाव किताव मेरै कार्यकालमा समाधान भएको थियो ।
० नेपालमा त लायन्स क्लव अलि बद्नाम जस्तो पनि भयो नि कुनै बेला, कारण के थियो ?
त्यतिबेलाको समय अहिले जस्तो यति धेरै सदस्यहरु थिएनन् । डिष्ट्रिक्टहरु पनि दुईवटा मात्र थिए, डिष्ट्रिक्ट ३२५ए र ३२५बी । धेरैखाले मानिसहरुले सदस्यता व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले पनि लिने भएकाले अलिकति अपवादका रुपमा फैलिएको अफवाह हो जस्तो मात्र लाग्छ मलाई ।
० अहिले नेपालमा लायन्स क्लवको अवस्था कस्तो छ ?
हिजोको दिनभन्दा नेपालको लायनिजमको अवस्था अत्यन्त सुन्दर र उज्वल भएर अगाडि बढिरहेको देख्छु । हाम्रो देशबाट इन्टरनेशनलसम्म लिडरसीपमा पहुँच पुगेको छ । नेपाल लायन्सको संसारमै यस्तो राष्ट्रमा पर्छ कि लायन्स क्लव इन्टरनेशनल फाउण्डेशनलाई डोनेशन दिनेमा १ नम्बरमा छ । सदस्यताको आधारमा पनि १ नम्बर पर्छ । सामाजिक कार्यको आधारमा १ नम्बरमा छ । यसरी सेवाको माध्यमबाट हेर्ने हो भने नेपाल लायन्सको र विश्वको नजरमा सधैँ अगाडि बढिरहेको छ ।
० अहिलेका नवप्रवेशी लायनप्रति तपाईंलाई केही भन्नु छ कि ?
नयाँ सदस्यहरुलाई पास्ट डिष्ट्रिक्ट गर्भनरको नाताले के भन्न चाहन्छु भने, यो संस्था विशुद्ध समाजसेवामा समर्पित डेमोक्रेट अर्गनाइजेशन हो । यसमा रहेर के पाएँ भन्दा पनि आफूभन्दा अलिकति पछाडि परेको समाज र मानव जातिलाई के दिन सकें र सक्छु भनेर व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्दै यसको गरिमामा रहेर लायन्सवादको विकास र सेवामा लाग्ने प्रण गर्नुहोस् । लायन्सको लेपलपिनको गरिमा राख्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने विनम्र आग्रह गर्दछु ।